फोरम सत्तामा जान आतुर,उत्पीडित समुदाय हेरेको हेर्य भए ! – Rajyasatta.com
Reading Now फोरम सत्तामा जान आतुर,उत्पीडित समुदाय हेरेको हेर्य भए !
यस्तो अति सम्बेदनशिल अवस्थमा, मेरो गौरवशाली पार्टी सङ्घिय समाजवादी फोरम, त्यही अन्यायी अत्याचारी kp को सत्ता सहकार्यमा जान खुट्टो उचालेको देखिन्छ। मुलुकको प्रमुख समस्या पहिचान र अधिकार नै हो, यहि पहिचान र अधिकार नै हाम्रो पार्टीको सुगन्ध हो, संविधान संशोधनको मुद्दापनी पहिचान अधिकार सङ्ग नै सम्बन्धित छ…। यदी यसो होभने, हाम्रो पार्टी यहि मुद्दा सम्बन्धित श्रदेयनेता चौधरीलाई, kp सरकारले यस्तो अमानवीय अततायी दुख दिदा समेत किन चुप छ..? kp सरकारसङ्ग यो विषयमा किन कुरा गर्दैन..? हामी हजारौं पहिचानवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु उहाँको विषयमा अत्यन्तै चिन्तित छौं।